June 5, 2021 1595
म्याग्दीको बेनीमा चमा`त्कार भएको छ । मुटुको चाल बन्द भैसकेको विरामीको ज्यान डाक्टरले बचाएका छन् । ती बिरामी खुट्टामा घा`उ भएप`छि बेनी अस्प`तालमा भर्ना भएका थिए । उनको उप`चारकै क्रममा अक`स्मात मु टुको चा ल ब न्द भयो ।
बेनी नगर`पालिका–६,डम्बराका ५५ बर्षिय ती मधु`मेहका बिरा`मीको मुटुको चा ल अचा`नक ब न्द भ ए को थियो । विगत १० दिनदेखि अस्प`तालमा उप`चारार्थ उनको मधु`मेहकै कारण खुट्टा बिग्रे`पछि शल्य`क्रियापछि स्वा`स्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको थियो ।
नियमित चेक`जाँचको क्रममा डा. नवराज बस्ता`कोटीले बिरामीको मुटुको चाल अचा`नक ब न्द भ ए को देखेपछि स्वास्थ्य`कर्मीको सहयोगमा करिब ८ मिनेट सिपि`आरको माध्यम`बाट काम गर्न छो डे को मुटुलाई जगाउन सफल हुनुभयो ।
दोस्रो`पटक करिब ३० सेकेण्ड मु टु को चा ल बन्द भएपछि डा. बस्ताकोटी, डा. डालिम काफ्ले सहित स्वास्थ्य`कर्मीको टोलीले १६ मिनेट सिपिआर विधिबाट पुनः होस फर्काउने कार्यमा सफलता मिल्यो ।
बि`रामीको अवस्थालाई हेर्दा बाँच्ने आस मा`रि`सकेको अवस्थामा समेत चमत्कारी सुधा`र भएको डा. बस्ता`कोटीले बताउनुभयो । ‘दुई पटक मुटुको चाल बन्द भयो, पहिलो`पटक सुधार भएपछि दोस्रो`पटक झन जटिल स`मस्या देखिएपछि आस मा रे पनि जगाउने प्रयास गरियो’डा. बस्ताकोटीले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार बिरामीमा चम`त्कारी सुधार आएको छ। हृदय घा त भएर ढ ले का बिरामीको मुटुलाई पनि यो उपचार विधिबाट पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सकिने भएकाले यसका बारेमा थप जानकारी दिने डा. बास्ता`कोटीको योजना छ ।
श`रीरमा र क्त सञ्चार भएर बिरा|मीको ज्या`न जोगिने विधि भएकाले यस बारेमा सन्देश फैलाउने डा. बस्ता`कोटीले बताएको समाचार बेनी अनलाईनमा हरिकृष्ण गौतमले लेखेका छन् । तस्वीर र भिडियो सहितको समाचार हामीले बेनी अनलाईनबाट साभार गरेका हौं ।
Prevआमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पुर्याएपछि आमाले भनिन् :छोरा तिमी फर्कने बाटो अफ्ठेरो छ, नलडी जानु है !
Next२४ घन्टा भित्र उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो लाई देश निकाला गर्नुपर्ने माग (विज्ञप्ति सहित)
युवतीलाई जबर-जस्ती अबिर दल्दा ग्याङ-फा’इट, भीरबाट लडाएर २ जनाको ह’त्या (भिडियो सहित)
रामकुमारी झाँक्री’लाई पक्रा’उ पूर्जी थमाउने एस.एसपी थापाकाे सरुवा ..
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (134699)